OWASP na OSINT: More na Cybersecurity, Nzuzo na Anonymity | Site na Linux
Taa, anyị ga-aga n'ihu na ntinye anyị metụtara isiokwu nke Nche IT (Cybersecurity, Nzuzo na Anonymity) na ha ka anyị ga-elekwasị anya OWASP y OSINT.
Mgbe, OWASP bụ ihe eji emeghe oghere ewepụtara iji chọpụta ma luso ọgụ ọgụ na akpata software. OSINT bụ usoro na usoro eji anakọta ozi ọha na eze, mezie data ma hazie ya, iji nweta ihe ọmụma bara uru na nke bara uru maka ụfọdụ ebumnuche ma ọ bụ mpaghara ụfọdụ.
Tupu mmiri abanye isiokwu nke OWASP y OSINT, dị ka ọ bụ omenala, anyị na-akwado mgbe ị gụsịrị akwụkwọ a, nyochaa ọdịnaya nke akwụkwọ ndị ọzọ anyị gara aga metụtara isiokwu nke Nche IT.
... Ọ dị mma ịkọwapụta na echiche metụtara Nchedo Ozi ekwesịghị ịbụ ihe mgbagwoju anya na nke Nchedo Kọmputa, ebe ọ bụ na, ebe nke mbụ na-ezo aka na nchebe na nchekwa nke ozi dị mkpa nke Isiokwu (Onye, Companylọ Ọrụ, itutionlọ Ọrụ , Agency, Society, Government), nke abụọ na-elekwasị anya na ịchekwa data n'ime sistemu kọmputa dị ka nke a. Nchedo Ozi: Akụkọ ihe mere eme, Terminology na Field of Action
1 OWASP na OSINT: Nhazi, Projects na Ngwaọrụ
1.1 Kedu ihe bụ OWASP?
1.1.1 OWASP oru
1.2 Kedu ihe bụ OSINT?
1.2.1 Kedu ihe bụ OSINT Framework?
OWASP na OSINT: Nhazi, Projects na Ngwaọrụ
Kedu ihe bụ OWASP?
Dị ka ukara website nke OWASP es:
"Ihe Open Web Security Security Project (OWASP) nke ntọala na-abaghị uru nke otu aha ahụ na-arụ ọrụ iji melite nchebe ngwanrọ. Ndi nhazi ya gunyere mmepe nke oru ngwanrọ na-emeghe. Foundation kwuru ugbu a nwere ihe karịrị 200 mpaghara mpaghara gburugburu ụwa, iri puku kwuru iri puku ndị otu ma na-eduzi nzukọ agụmakwụkwọ na ọzụzụ na mpaghara ahụ."
N'ihi ya, o doro anya na lekwasịrị nke OWASP Ntọala es:
"Bebụ obodo na-emeghe emeghe nke enyere ndị otu aka ịtụrụ ime, ịzụlite, nweta, rụọ ọrụ ma jigide ngwa ndị a pụrụ ịtụkwasị obi. Maka ha, ọrụ ha niile, akụrụngwa, akwụkwọ, forums na isi e kere bụ n'efu ma meghee nye onye ọ bụla nwere mmelite imezi ngwa."
Ihe niile Ihe ngwanrọ na ngwa ọrụ mere site OWASP nwere ike anya na g? Ngalaba Projects, na kwa na ha ukara website na GitHub. N'ime ndị a kacha mara amara anyị nwere ike ịkpọtụrụ ndị na-esonụ:
OWASP kacha nke 10: Project nwere ọkọlọtọ mmata akwụkwọ maka web mmepe na mmepe. Nke ahụ na-anọchitekwa anya nkwekọ sara mbara na oke egwu dị egwu maka ha.
Ntuziaka Ule Nlekọta Weebụ (WSTG): Project mejupụtara Ntuziaka Ule Weebụ Web na-ewepụta ihe nyocha nke cybersecurity nke mbụ maka ndị mmepe ngwa weebụ na ndị ọkachamara nchekwa. Ya mere, ọ bụ ezigbo usoro zuru oke maka ịnwale ọrụ weebụ yana nchekwa ngwa, ebe ọ na-enye usoro nke usoro kachasị mma nke ndị nyocha na òtù dị iche iche gburugburu ụwa na-eji. E nwekwara otu maka ngwa igwegharị.
Kedu ihe bụ OSINT?
Kemgbe OSINT Ọ bụ, dị ka anyị kwuru na mbido: "usoro na usoro eji achịkọta ozi ọha na eze, dozie data ma hazie ya, iji nweta ihe ọmụma bara uru na nke bara uru maka ebumnuche ma ọ bụ mpaghara ụfọdụ"; otu ihe enweghị ukara website. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ weebụsaịtị na-enye ọtụtụ ozi bara uru yana ngwaọrụ OSINT. Kedu nke enwere ike iji ma nyocha ma wakpo isiokwu dị iche, ma ọ bụ maka onye ọ bụla ịme ihe dị mkpa iji gbochie ọgụ dị otú ahụ.
Ọ dị mkpa ka dokwuo anya banyere OSINT nke na-esote:
"Okwu a bu “ihe mepere emepe” n’ime OSINT anaghi ekwu maka mmeghari ngwanrọ nke Open Source, n’agbanyeghi na otutu ngwa oru OSINT bu Open Source; kama, ọ na-akọwa ọdịdị ọha mmadụ nke data a na-enyocha."
Kedu ihe bụ OSINT Framework?
N'etiti weebụsaịtị metụtara OSINT anyị nwere ike banyere OSINT Okpokoro. Enwere ike ịkọwa ya:
Ebe nchekwa dị n'ịntanetị nke gụnyere ọtụtụ ngwaọrụ (ngwa, ọrụ weebụ) iji mepụta ọchụchọ na isi mmalite ozi. Ọ na-arụ ọrụ dịka faịlụ na-echekwa ma na-ekewa ngwaọrụ ndị a ga - eji na nyocha OSINT. Ngwaọrụ ndị a bụkwa usoro ọba akwụkwọ nke ụdị GPLv3 (n'efu na oghere), nke na-enye ohere ịnakọta ụdị data (ozi) maka nyocha dị mkpa. Kpọmkwem, ngwaọrụ ndị a nwere ike ịchọpụta ma nakọta data, dị ka, Aha njirimara, adreesị ozi-e, adreesị IP, Multimedia resources, Profaili na netwọk mmekọrịta, Geolocation, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Maka ndị ahụ, nwere mmasị ịmatakwu banyere OSINT ị nwere ike ịga leta gị gọọmentị webụsaịtị na GitHub ma ọ bụ nke na-esote njikọ.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «OWASP y OSINT», Isiokwu 2 na-adọrọ mmasị na-ekpuchi òtù, oru ngo, ngwaọrụ, na ọtụtụ ndị ọzọ, na-akwado ihe siri ike na nghọta Nche IT (Cybersecurity, Nzuzo na Anonymity); nwee mmasị na uru dị ukwuu, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » OWASP na OSINT: More na Cybersecurity, Nzuzo na Anonymity